कोरोना भाइरस बारे जान्नै पर्ने कुराहरु! अपनाउनुहोस यस्तो सतर्कता ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कोरोना भाइरस बारे जान्नै पर्ने कुराहरु! अपनाउनुहोस यस्तो सतर्कता !
admin January 28, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
नाक मुख छोप्ने mask राम्रोसंग लगाएका केहि स्वास्थकर्मीमा virus भएको हात आँखामा लैजाँदा virus शरीर भित्र पसेको खबर आउन थालेको छ। यो खबर सुनेपछि केहिले virus फैलन सक्ने ठाउँमा जाँदा swimming goggles आँखामा लगाउन थालेका छन्। आजसम्म मृत्यु भएकाहरु अधिकाम्श ५० नाघेका, immune शक्ति कम भएका वा अन्य रोगहरु पनि पहिले देखि भएका मात्र छन्। यो पोस्ट गर्दासम्म यस virus फैलने क्रम कत्तिपनि रोकिएको छैन।
यसको शुरुवाती लक्षण र सामान्य रुघाखोकीको लक्षण उस्तै हुन्छ। तर यसले अलि बढी गलाउने, लामो समय सम्म सताउने, ज्वरो आउने, थकित बनाउंदै जाने, खोकी बढ्दै जाने, स्वाशप्रस्वासमा समस्या दिंदै जाने आदि हुन्छ। समयमा उपचार नगर्दा अन्तिममा फोक्सो, कलेजो र मृगौलामा समस्या भएर ज्यान जान्छ।
Coronavirus बारेमा जान्नु पर्ने कुराहरु
यो आँफुमा फैलन नदिन अन्य रुघाखोकी दिने virus संग जोगिने उपाय जस्तै उपाय गर्नु पर्छ। जस्तै:- यस्तो virus आफ्नो ठाउं नजिक फैलिएको थाहा भएपछि mask लगाएर हिड्ने; घर बाहिरको कुरा हातले छुने बित्तिकै साबुन पानीले हात धोई हाल्ने वा alcohol sanitizer प्रयोग गर्ने; भिडभाडमा नजाने; बृद्ध, रोगी, बालबच्चा र गर्भवतीलाई अति आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिकाल्ने; मिल्दासम्म बाहिर जाँदा लगाएको कपडा छुट्टै राख्ने र washing machine मा धुने अनि ति कपडा नधोई अरुलाई छुन नदिने; राम्रो diet गर्ने; अरुलाई नसरोस भनेर आंफुले खोक्दा मुख छोपेर खोक्ने; मिल्छ भने छुट्टै कोठामा बस्ने र अरुको नजिक नजाने; खाने भाँडाकुँडा आँफै माझेर सुकाउने; निको नहुँदासम्म वा उपचार बिधि नसकिंदासम्म छुट्टै बस्ने।
आँफुलाई रुघाखोकी सुरु भएको र सामान्य रुघाखोकीले भन्दा ज्यादा गलाएको महसुस हुने बित्तिकै आँफु नजिकको स्वास्थ चौकी वा सरकारी अस्पतालमा phone गरेर मात्र जाने। जाँदा mask लगाएर जाने।
प्राय (अधिकतम case मा, संसारभर नै) मानिस-मानिस बीच सर्ने virus ले (हजारौं बर्षसम्म मानबले त्यस बिरुद्ध लड्ने शक्ति उत्पादन गरिसकेको कारण) स्वस्थ व्यक्तिको ज्यान लिंदैन तर अहिले फैलिएको coronavirus पुरानै class को virus ले आफ्नै genetic component परिवर्तन गरेर नयाँ जात (strain) बनाएको अवस्था हो। यो virus (Coronavirus 2019-nCoV) लाई पूर्ण नष्ट गर्ने औषधि उपचार छैन। यसले पार्ने असर कम गर्न मात्र औषधि उपचार सकिन्छ।
नेपालको case मा यदि काठमाडौँमा यो virus एउटा मानिसबाट अर्को ३-४ जनामा सर्यो भने यसलाई रोकथाम गर्न (नेपाल सरकारले केहि समय अघिको dengue लाई रोक्न देखाएको सक्रियतालाई आधार मान्दा) यो नेपालले थेग्न सक्दैन। त्रिभुवन विमानस्थलमा बाहिरबाट आउनेको 24 hrs health चेकजांच गर्ने ठाउं हेर्दा र सक्रियता हेर्दा उदेक लाग्दो छ।
Coronavirus (2019-nCoV) बारेमा धेरै कुरा अनुसन्धान हुनै बाँकि छ त्यसैले थप information आउने बित्तिकै अर्को पोस्ट update गर्नेछु।
यो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया बिभिन्न Facebook group हरुमा Share गरिदिनुहोला। Dr. Kalyan Subedi, DNP, PMHNP
गएराति लजमा यस्ताे अवस्थामा भेटिए ४ जाेडी
नेपालमै नमुनाः १० वटा सिग्नेचर पुल निर्माण हुदै, कहाँ कहाँ बन्दैछन? हेर्नुस्
बिहानैै सुकुटे दुर्घटनाको ताजा अपडेट यस्तो छ